Axmed filmkiisa cusub oo ka qaybgalaya bandhigga carwada aflaanta Stockholm - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Filmka Frances waxuu ku sabsanyahay dhowr rag oo shaqaale ah oo laga keensaday dalka Kameruun si ay uga shaqeeyaan beeraha dhirta balse markii ay howl bilaaben ogaadeen in mushaarkii loo ballan qaaday laga khiyaamay. Soo saaraha filmkan waa Ahmed Abdullahi.
Axmed filmkiisa cusub oo ka qaybgalaya bandhigga carwada aflaanta Stockholm
La daabacay torsdag 12 november 2015 kl 12.19
Todobaadkan magaalada Stockholm waxaa ka bilowday bandhigga carwada aflaanta Stockholm - Filmfestival. Bandhigga ayaa sannadkan ku saabsan mowduuca socdaalka ama migration
Aflaanta ka qayb galaysa tartanka bandhiggan waxaa ka mid ah film la yiraahdo Francis oo uu soo saaray Ahmed Abdullahi oo ah film soo saare soomali iswiidhish ah. Filmkan oo ah film gaaban ayaa ku salaysan dhacdo run ah oo ka dhacday dalkan Sweden. Dhowr rag oo shaqaale ah oo laga keensaday dalka Kameruun ayaa laga shaqaalaysiiyey howdka Sweden si ay uga shaqeeyaan dhirta. Waxaa loo ballan qaaday mushaaro joogta ah bil kasta, balse markay halkan yimaadeen waxaa u cadaatay in la khiyaaney oo aysan waxba ka jirin mushaarkii loo ballan qaaday. Riyadoodii aheyd in ay nolal wanaagsan sameystaan waxay isku badeshay riyo naxdin leh. Ahmed Abdullahi markii uu maqlay dhacdadan wuxuu dhiganayey jaamacadda dramatiska institutet oo uu ka baranayey film soo saaridda. Qisada raggan qabsatay ayaa aad u taabatay oo uu ka naxay. Saddex sanno ka bacdiina markii uu ka qalinjabiyey jaamacadda, mashruucii uu ku qaadanyey shahaadada film soo saaridda wuxuu ka dhigtay in uu dib ugu noqdo qisaddan, kana sameeyey filmkiisa cusub ee Francis oo axadda lagu soo bandhi doono aqalka aflaanta ee magaalada Stockholm.
Filmkiisa Francis ayaa ka qaybgalaya tartatnka carwada aflaanta ee magaalada Stockholm - Filmfestival. Aflaanta sannadkan laga dhigi doono bandhigan waxaa loo kalo qaadey dhowr qaybood, qayb ka mid ah waxaa lagu soo qaadan doono Filim soo saarayaasha ku cusub xirfadda aflaan sameeynta, kuwaas u tartami doona billadda abaalmarinta ee Bronshästen.
Sidoo kale sannadkan bandhiga Stockholm filmfestival waxaa abaalmarin loo bixiyey - Stockholm Impact Award – la gudoonsiin doono filmada kor u soo qaada xaquuqda insaanka. Abaalmarinta biladda waxaa wadajir u baxinaya Stockholm Filmfstival iyo maamulka magaalada Stockholm. Cidda ku guuleysatana waxaa lagu abaalmarin doonaa hal milyan oo koron .